Maraakiib Midowga Yurub oo Tahriibayaal bad-baadiyay – Radio Daljir
Juunyo 7, 2015 5:40 b 0
Axad, Juun 07, 2015 (Daljir) — Warbixin ka soo baxday Midowga Yurub, ayaa waxaa lagu shegay in ay Maraakiibtooda ay soo samata bixiyeen, qiyaastiin 3,400 oo muhaajiriin ah kuwaasoo ku soo ku safrayay biyaha Mashquulka badan ee Mediterranean sea.
Warbixinta ayaa sidoo kale muujineysa in 100, ka mid ah muhaajiriinta in ay yimaadeen koonfurta dalka talyaaniga, gaar ahaan Degmooyinka Palermo iyo Trapani. Dowlada ingiriis-ka ayaa waxaa ay ka digtay in Nus Million Muhaajiriin ah ay soo galaan Yurub, maalmaha soo aadan, kuwaasoo iminka ku sugan dalka Libiya.
Tahriibayaasha oo la sheegay inay kumannaan gaarayeen waxa ay ku safrayeen 14 doomood.Waxaa la qabtay saacado kaddib markii ay ka dhaqaaqeen xeebaha koofureed ee Liibiya.
Dowladda Puntland oo taageertay Go’aankii Jubbaland ay xiriirka ugu jartay Dowladda Soomaliya